လူကြိုက်အများဆုံးကတ်များဖီဖာ 19 ကစားသမား - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
11 ကတ်များကစားသမားရာကိုမကြာခဏကိုရှေးခယျြဖီဖာ 19,
ဖီဖာ 19 - ဂိမ်းကစားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း mode နဲ့စွဲလမ်းအွန်လိုင်းတိုက်ပွဲများ Ultimate Team မှကျေးဇူးတင်စကားစောင့်ရှောက်သောလူကြိုက်အများဆုံးအားကစား Simulator ကို။ 2018 ကစားသမား၏အဆုံးအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာသုံးပြီးက virtual နယ်ပယ်များတွင်တိုက်ပွဲတွေလည်းသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းရာထူး၏တစ်ဦးချင်းစီမှာအချို့ကစားသမားများယူတဲ့သဘောထားကိုရှိ၏။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့ဖီဖာ 19 ကစားသမားကတ်များလူကြိုက်အများဆုံးရှိသနည်း ဤရွေ့ကားယောက်ျားတွေအများအားဖြင့်ယင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကစားသမား Ultimate Team အတွက် ယူ. , ကစီရော်နယ်ဒို, Lionel Messi နှင့်နေမာမဟုတ်ပါဘူး!
အများစုက Ultimate Team mode မှာအဆိုပါဂိုးသမားအသုံးပြုသောအဆိုပါမှူးအဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံအမျိုးသားရေးအသင်းနှင့်ဘောလုံးကလပ်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် Thibaut Courtois ဖြစ်လာသည်။ တော်ဝင်ကလပ်တံခါးစောငျ့ရှောကျသူ၏အနေအထားအတွက်ထိပ်တန်း rated ကစားသမားမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်သော်လည်းနီးပါး 13 သန်းအွန်လိုင်းပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။
90 စုစုပေါင်းကိန်းဂဏန်းနှင့်အတူသူ 11 သန်းဂိမ်းတွေနဲ့သာ 4th ရာအရပျကိုလက်စသတ်သောသူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂိုးသမား David de Gea, ်ခံပါသည်။ ချန်ပီယံနှင့်စပါးဂိုးသမားဟူဂို Lloris တည်ရှိသောဒုတိယလိုင်းတွင်။
ကာကွယ်ရေးကစားသမား၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်မကြာခဏဒုံးပျံအင်္ဂလိပ် Kyle Walker ကထားတော်မူ၏။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက် Lateral မန်ချက်စတာစီးတီးဿုံမဆိုထောက်ခံမှုနှစ်ဦးစလုံးကာကွယ်ရေးနှင့်တိုက်ခိုက်မှု၌သူ၏နဖူးပေါ်လှုပ်ရှားမှု၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြန်နှုန်းကိုကျေးဇူးတင်ပြည့်။ အဆိုပါ Ultimate Team အတွက် Kyle Walker ကအဘို့အ Card ကို 12.8 သန်းပွဲကစားခဲ့ပါတယ်။
11.5 သန်းဂိမ်းများကိုကစားခဲ့ကြရာအန်တိုနီယိုဗလင်စီယာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၏ညီပြိုင်ဘက်တည်ရှိသောဒုတိယလိုင်းတွင်။ အများဆုံးထိပ်တန်း rated flangovikom ထိပ်ဆုံးငါးဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားများနှင့် 86 ယူနစ်အတွက်လူသိများကျွမ်းကျင်မှု-card ကိုအကြောင်းကြားရန်ပျေါတူဂီဂျိုအာ Cancela လှည့်။
အဆိုပါပွဲစဉ်၌ကျန်ကြွင်း-ပြန်၏အနေအထားကို 12.3 သန်း Lateral ဂျူဗင်တပ်စ်အဲလက်စ် Sandro ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဘရာဇီးကစားသမား scorecards ကျွမ်းကျင်မှု, မြန်နှုန်းမြင့်ပြေး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့် 86 ယူနစ်စုစုပေါင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာထိုးစစ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်။
သငျသညျဘရာဇီးများအတွက်ပေးသော 89 ဆန့်ကျင် 36 တထောင်ဒင်္ဂါးပြားတစ်ဦးစုစုပေါင်း - သူဒါဟာနောက်ဆုံးကျွမ်းကျင်မှု Alba များစွာသောညွှန်ပြချက်နီးပါးသုံးကြိမ်စျေးနှုန်းချိုသာ Sandro ကုန်ကျသောအခါစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် 87 တစ် rating နှင့်အတူဘာစီလိုနာ Jordi Alba ၏အရင်းနှီးဆုံးလိုက်သော4သန်းဂိမ်းအားဖြင့်ရှေ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Ultimate Team အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးကစားသမားတစ်ဦးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ tsentrbek စပါးနှင့်အဖွဲ့ကိုလံဘီယာ Devinson Sanchez ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ ကဒ် Player ကိုသာ 16 တထောင်ဒင်္ဂါးပြားကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်, သို့သော်၎င်း၏တစ်ဦးလျောက်ပတ်သောအမြန်နှုန်း, ထူးချွန်ခုခံကာကွယ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် 84 ယူနစ်တစ်ခုအစိုင်အခဲခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှင်းလင်းစွာပိုပြီးစျေးကြီးအကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Sanchez အနေအထား 15.6 သန်းကိုက်ညီနောက်ကျောအလယ်ဗဟိုတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
Sanchez တရံ၌ထငျရှားသောဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးဗဟိုနောက်ခံလူကမ္ဘာ့ချန်ပီယံနှင့်ချန်ပီယံလိဂ် Raphael Varane သုံးခုအချိန်ဆုရှင်လှည့်။
86 တစ် rating နဲ့သူ့ရဲ့ကဒ် 182,000 ဒင်္ဂါးပြားကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်း Varan 13.2 သန်းဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအနေအထားမကြာခဏစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အစပြုသူလီဗာပူးလ်ဘရာဇီး Fabinho ယူ opornika ။ Player ကိုအကြီးအပြိုင်ဘက်ခံစားရအမြဲတမ်းဘောလုံးကိုအဘို့အမဲ။ ထို့အပြင် 85 Fabinho များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပထမဦးဆုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မြန်နှုန်းရှိပါတယ်။ မိမိအ card ကို 24 သန်းဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးလုပ်ရပ်များ opornikom Ngola န်။ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံနှင့် 400 000 ဒင်္ဂါးပြားအာကာသတန်ဖိုးရှိချယ်လ်ဆီးဝေါလ်, ဒါပေမယ့်ကစားသမားထိုကဲ့သို့သောအလွန်သေးငယ်သော tofgaya ပိုက်ဆံပေးရမတှနျ့ဆုခဲ့ပါဘူး။
12.6 သန်းဂိမ်းများနှင့်အရူးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 89 ယူနစ် - စုံလင်ကာကွယ်ရေးစင်တာလိုင်းတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်အခြားဘာလဲ?
ရာထူးဗဟိုကွင်းလယ်လူခေတ်သစ်ဘောလုံးလောကမှာပေါလု Pogba ၏အများဆုံးရောင်စုံဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကိုယူ။ အဆိုပါကစားသမားအကြွေစေ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေချွေးနှင့်သွေးပေးရတှနျ့ဆုတျမပြုခဲ့ရသောအဘို့နောက်ထပ်ကဒ်။
400 တထောင် - ဒီပြင်သစ်၏ကြယ်ပွင့်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအ card ကိုဗဟိုကွင်းလယ်ကစားသမားများ၏အနေအထားမှ 13.5 သန်းကြိမ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုအရာတစ်ခုခုကို Pogba ပွဲ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအရေအတွက်အဖွဲ့စိတ်ပျက်ဘယ်တော့မှကိုပြောထားသည်!
တိုက်ခိုက်မှု၏ဘယ်ဘက်အစွန်၏လူကြိုက်အများဆုံးကစားသမားတို့တွင်ပထမနေရာတွင်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂျာမန်တောင်ပံကစားသမား Leroy စိတ်ကောင်းသောရောက်လာတယ်။ လျှပ်စီးအစာရှောင်ခြင်း, သန်မာတဲ့အကြီးအအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးထိုလူငယ်ကစားသမားအနေဖြင့်တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်အချို့သော 50 တထောင်ဒင်္ဂါးပြားကျိုးနပ်သည်။
အွန်လိုင်း Modes သာက 11 သန်းကြိမ်ရွေးကောက်တော်မူပြီ။ အနီးဆုံးလိုက်သော - ဆီနီဂေါလီဗာပူးလ် Sadio လည်ဆံ, 1 သန်းသေးငယ်တဲ့ဂိမ်းသုံးစွဲရာ။ ထိပ်ဆုံးငါးလည်းအောင်မင်းဟွန်သီချင်း, ဒေါက်ဂလပ်ကော့စနှင့် Anthony Marcial ပါဝင်သည်။ 6000 ဒင်္ဂါးပြား - အဆုံးစွန်သောစကားမစပ်, စံချိန်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းတာမျိုး။
ညာဘက်တောင်ပံကစားသမားအနေအထားတွင်သူဖြစ်ကောင်းခေတ်မီ Kilian Mbappe ပြင်သစ်၏အရည်အချင်းအရှိဆုံးငယ်ရွယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကအရူးအမြန်နှုန်း, စိတ်ကူးနည်းပညာနှင့်မယုံနိုင်စရာအသွင်ကိုကူညီပေးနေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ 350000 ဒင်္ဂါးပြားကိုဆိုလိုတာပါ။
PSG အသင်းထံမှတောက်ပအငယ်တန်းကမ္ဘာ့ဘောလုံး၏ Olympus တို့အပေါ်ကိုချွတ်ယူပြီး, လက်ျာခြမ်းအပေါ်တိုက်ခိုက်မှု၏ 12 သန်းကြိမ်ထင်ရှား။ , လီဗာပူးလ်အသင်းအနေဖြင့်သူ၏အရင်းနှီးဆုံးလိုက်သောမိုဟာမက် Salah 10.7 သန်းကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည်ပေမယ်ယူနစ်တစ်ခုခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြောင့် Mbappe ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပါတယ် - 87 ဆန့်ကျင် 88 ။
ပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌တိုက်စစ်မှူးများအနက်တစ်ဦးကျိုးနွံပေမယ့်အလွန်မျှတတဲ့ stats ဂါဗြေလညျယရှေုမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အချို့သော 7000 ဒင်္ဂါးပြားတန်ဖိုးရှိမန်ချက်စတာစီးတီးထံမှဘရာဇီးလ်, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်အစွမ်းထက်လာကြတယ်ရှိပါတယ်။ ယရှေုသညျအပြင်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားရှိနေသော်လည်းဿုံအားဖြင့်အနေအထားအနိုင်ရနှင့်အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းဖွင့်လှစ်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုသတ်မှတ်။ ဂါဗြေလ 12.6 သန်းပွဲများမှရွေးယူကြ၏။
အနီးဆုံးလိုက်သောဆီဗီလာတိုက်စစ်မှူးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဘင် Yeder ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ 84 ယူနစ်တစ်ခုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ-card ကိုအသိပေးပါ။ အဆိုပါပြင်သစ်အွန်လိုင်း 12 သန်းဂိမ်းနေခဲ့ရသည်။ Next ကိုရောဘတ် Firmino, Antoine Grism နှင့်ခန်းခြောက် Mertens အခြေချခဲ့သည်။
လူကြိုက်အများဆုံးကတ်များဖီဖာ 19 ကစားသမားဖွဲ့စည်းမှုဆောင်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင့်ကိုယ်သင်နေတဲ့အပူအပင်ကင်းပြီးနှင့်အွန်လိုင်းကစားအဆင်ပြေသေချာပါလိမ့်မယ်။ ဘောလုံးကစားသမားပြီးသားပွဲ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သော့ချက်ရာထူးအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်နေပါတယ်။